Top 10 Most jeclaysteen iyo waxaanay jeclaysan Videos YouTube (Latest)
In adduun internet waalan, waxaa jira Dhawa qof, yar iyo waayeelka, oo aan isticmaalaysa YouTube. Sababtan aan si cajiib ah dabcan, videos music ama funny videos dareenka ugu badnaan naga hesho. Laakiin qaab nololeed degdeg ah bixilahaayeen ayaa nagu qasbay in la yareeyo waqtiga loogu talagalay madadaalada iyo waxaan oo dhan loo helo xogta ugu wanaagsan inta lagu jiro waqtigan yar. Sidaas, si ay kuu caawiyaan guys in this, liiska gebi ahaanba updated ah 10 ugu jeclaa Youtube videos iyo 10 ugu Naceen Youtube videos loo diyaargareeyey. Waxaad heli doontaa magaca videos, xidhiidhada iyo tirada kooxaha ama necebyahay (taas oo kordhinaysa labaad kasta Mudan in, dunida). Sharaxaad video for kasta iyo sababta ay jecelyihiin ama Naceen waxaa lagu bixiyaa haddii aad go'aansato in aad ogaato waxa ay tahay oo dhan oo ku saabsan ka hor inta kugu dhuftay link iyo sidoo kale kuwa doonaya inay wax badan ogaadaan. Ku raaxayso.
Qeybta 1: Top 10 Most jeclaa Videos YouTube
Qeybta 2: Top 10 Most Naceen YouTube Videos
1. cilmi - Gangnam Style (Gangnam Style) M / V
"Gangnam Style" waa hees pop 18aad Korean by muusikaystayaasha South Korea Psy, kaas oo la sii daayay, sida keli ah ee hogaanka uu album studio 6aad Psy 6 (Lix Rules), Qaybta 1. in July 2012 song waxay leedahay in ka badan 2 bilyan YouTube daawadayaasha sida ee 10 June, 2014 "Gangnam Style", neologism ah Kuuriya, waxa loola jeedaa qaab nololeed ee la xidhiidha Degmada Gangnam ee Seoul. In video PSY waxaa la arki fulinteeda u dhaqaaqdo arrin aan caadi ahayn oo u qosol badan qoob.
Maxaad jeclaan: Wixii dhaqaaqdo garaaca eegayey iyo qoob farxad leh ay, kuwaas oo Keeban dadka dunida oo dhan, oo xataa ay ku jiraan guys caan ah sida Obama.
2. Ylvis - Fox The (? Muxuu Fox waxaad dhahdaa waxay)
"Fox The (Waa maxay Fox ma waxaad dhahdaa?)", Waa elektaroonik ah qoob video by walaalaha ahaa majaajiliiste Norwegian Ylvis u baxay viral ka dib markii ay sii daayo. Tani song, "Fox ayaa" waxaa lagu posted on YouTube 3 September 2013, oo ka badan 420 milyan oo views sida June 10, 2014 walaalo ah ayaa sheegay in ay doonayeen in ay "si xun" ayuu oo talanti oo ah koox-soo-saarka liiska A saamayn maadda . Video ayaa qoreysa walaalaha ee dharka xayawaanka iyo qoob ka kaynta dadka kale adadayga iyo gabaygayga waxay bixisaa dhowr fursadaha sii kordheysa aan macquul ahayn dhawaaqa dawacada ee.
Maxaad jeclaan: Wixii lyrics ay funny halkaas oo ay isku dayaya absurdly sida dawaco u muuqan kartaa habka iyo maadda ah ee bandhigga.
3. cilmi - mudane M / V
"Gentleman" waa mar ay Psy kaas oo la sii daayay April 12, 2013 (KST). Heesta waa follow-up ee uu hit caalamiga ah hal "Gangnam Style". Sida of 9 June 2014, video ah iyadoo ay daawanayeen in ka badan 695 milyan oo daawadayaasha on YouTube. Heesta leedahay in English lyrics badan "Gangnam Style". In video Psy u qabata dheel dheel ah ungentlemanly dadka kala duwan ilaa uu la kulmay gabar oo uu jiidayo dheel dheel ah unmannerly isaga. Video waxay leedahay "maroojin galmada" oo u qalma in uu hore hal iyo qoreysa Psy fulinteeda "degdeg ah, hip-dharbaaxay qoob ka ciyaarka," a surwaal naagaha ciyaaraha iyo diyaariyeen ah ee jaakadaha in midabo kala duwan iyo muraayadaha in uu noqdo caan ku ah xirnaa.
Maxaad jeclaan: Taageerayaasha filayeen kor u ah inay qaab sumaddii ka dib "Gangnam Style" iyo PSY u dhiibay. PSY ayaa u dhaqaaqdo qoob cusub iyo farxad leh oo eegayey garaaca hip-hop ayaa Taageerayaasha wacdaro iyo sidoo kale dadka dhaleeceeya mar kale.
4. MACKLEMORE & Ryan Lewis - feat dukaan Rahiiska. WANZ (VIDEO RASMI)
"Rahiiska Shop" waa hees by Labada hip hop American Macklemore & Ryan Lewis oo la sii daayay 27-kii August, 2012, hal Macklemore ee siddeedaad oo mustaqbalkiisa oo hal shanaad ka album studio ugu horeysay ee Heist The (2012). Video ayaa helay in ka badan 541 milyan oo views on YouTube sida ee 9 June 2014. song ayaa waxaa ka kooban si ay u muujiyaan Macklemore ayaa kalsooni dukaamada stores iyo lacag, soo horjeeda show off heesaa badan bandhigay. Heesta oo muujineysa xiiso Macklemore ee iibsato dhar raqiis ah dukaamada stores, isagoo fududaysanaya sumadaha naqshadeeye iyo isbeddellada.
Maxaad jeclaan: muraajiceeyey Music amaanay song lyrics ee ay kaftan ah iyo inay qiimeeyaan bulshada.
"Baby" ayaa la sii daayay in Bieber ayaa album u saftay. Waxay leedahay in ka badan 1 bilyan oo views on YouTube sida ee 10 June 2014. Heesta waa-Tempo muuqan Bieber ee R & B vocals, isku wada qoob-pop iyo xubno hip-hop oo ay la socdaan saameynta of music Doo-wop. Video ayaa, taas oo Bieber duullimaadka ah ka dib markii gabar yar oo sidoo kale dhowr cameos sida Drake oo marooji Lil.
Maxaad jeclaan: song ayaa heshay dib u eegista fiican lyrics ay wax ku ool ah iyo chorus iyo muraajiceeyey ammaanay Ludacris 'qayb iyo awoodda song in ay leedahay maroojin magaalo.
"Wrecking Ball" waa hees ay fuliyeen artist lagu qoro American Miley Cyrus iyada u album afaraad studio Bangerz (2013). Waxaa la sii daayay August 25, 2013. Sida ee 10 June 2014 waxay leedahay in ka badan 664 milyan oo daawadayaasha on YouTube. "Wrecking Ball" waa Balcad pop oo lyrically ka hadlaysaa sii daraysa ee xiriir ah. Video waxay muujinaysaa Cyrus ku labisan shaati gacmo gaab cad iyo nigis halka dharbaaxay kubada wrecking iyo tearfully heeso.
Maxaad jeclaan: Heesta ayaa lyrics wanaagsan iyo laxan aad u nunu iyo Walbahaar oo muraajiceeyey qaar ka mid ah ayaa waxa uu tilmaamay sida maanta oo casri ah "qalbigaygu kulama socon doonaa". Sidoo kale la socoto sida ugu Cyrus waxaa loo arkaa in video ah, isla dhexmarayo in la dhiirigeliyo Cyrus ee doone hore ee Liam Hemsworth ayaa sii shiday laga yaabaa in ay caan.
7. Katy Perry - guuxeen (Si Rasmi Ah)
"Guuxeen" waa Katy Perry iyada u album afaraad studio, Prism (2013). Sida of 10 June 2014 waxay leedahay in ka badan 528 milyan oo daawadayaasha on YouTube. Lyrics cinwaanka taagan baxo uuna iyo is-siinta, waayo. Video ayaa qoreysa Perry ka dib markii badbaaday shil diyaarad isku dayaya inuu la qabsado kaymaha iyo xakameeynta Shabeel a.
8. LMFAO - Xisbiga Rock Heesta ft Lauren Bennett, GoonRock.
"Xisbiga Rock Heesta" waa ay labada American duubo qoob-pop LMFAO (Redfoo iyo Sky Blu). Sida of 10 June 2014 waxay leedahay in ka badan 697 milyan oo daawadayaasha on YouTube. Video waa parody ah film 2002 naxdinta badan 28 maalmood ka dib. Video waxay muujinaysaa in uu cudur dillaaca iyo dunidii oo dhan waalan iyo markii song soo baxay, qof kasta oo helay hantiyo, oo waxay isku shaandheyn.
Maxaad jeclaa, video ayaa qoreysa ahaydba fulinaya Melbourne isku shaandheyn ku ah, kaas oo si deg deg ah helay taageero oo dalka Mareykanka ah.
9. Gotye - Qof Si aan u ahaydeen kuwo aan ogayn (feat Kimbra.) - Video rasmi ah
"Qof Si aan u ahaydeen kuwo aan ogayn" waa hees qoraal ah oo diiwaan-Belgian-Australian Fanaanada-Xisbi Gotye muuqan Kimbra, ee New Zealand oo gabayaa ahaa-guitarist, sii daayay 5 July 2011 Sida ee 10 June 2014 waxay leedahay in ka badan 516 milyan oo daawadayaasha on YouTube. Waa bartamihii Isbadalo Balcad ah pop indie. Waxa ay muujinaysaa in Gotye iyo Kimbra qaawan kadib cad. Qaabka ka rinjiga si tartiib tartiib ah daboolayaa maqaarkooda oo la ogaa inuu via animation stop mooshin halka iyana waxay ku gabyeen.
Maxaad jeclaan: lyrics awood leh oo fudud in la hadal caalami ah jabka indhaha dhegeysiga Gotye ee ay la socdaan ay habayn xaabo fudud intii qalbigaygu in codkooda la yaab leh. Animation farshaxanka ee video waa mid aad wax ku oolka ah.
10. Mid ka mid ah Direction - Maxaa ka dhigay Waxaad Beautiful
"Maxaa kaa Beautiful" waa hees ay koox wiil English-Irish One Direction. Heesta oo u taagan sidii ay u safto hal iyo hal hogaanka ka album studio u saftay. Sida of 10 June 2014 waxay leedahay in ka badan 526 milyan oo daawadayaasha on YouTube. Track waa hees kor-Isbadalo ah oo interpolates qaybaha pop pop dhallintaada, pop xoog iyo dhagaxii weynaa pop. Video waxay muujinaysaa xubnaha guutadii waa safar uu ku tago xeebta oo xiiso leh gabdhaha.
Maxaad jeclaa, Wixii ay luuq weli fudud Salel iyo aad u eegayey oo jiidanaya jiilka yar yar iyo sidoo kale jeclaan sida qoob ka ah.
"Baby" ahaa hit ah, laakiin sidoo kale helo necebyahay badan.
Maxaad Naceen: Dad badan ayaa codkiisa gabadhnimo ama ha jeclaan ..
2. Friday - Rebecca Black - rasmiga Music Video
"Friday" waa hees by artist lagu qoro American Rebecca Black oo la sii daayay, sida hal ku March 14, 2011 sida ugu horeysay ee hal Black ayaa. Sida of June 10, 2014 Waxa ay leedahay in ka badan 68 milyan oo Youtube views. Video waxay muujinaysaa Black soo tooso oo la kulmay saaxiibadeed jidka dugsiga. In fiidkii, ka dib markii doodo ka badan fadhiya kursiga hore ama danbe ee la bedeli karo, Black iyo saaxiibadeed kortaan gaariga xaflad at 7:45 pm. Raabka A gaaban waxaa loo sameeyaa by Patrice Wilson dhow dhamaadka heesta.
Maxaad Naceen: lyrics xun oo soo noqnoqda waa sababta ugu weyn.
"Wrecking Ball" waa hit ah ee 2013. Laakiin Cyrus gashan aad u yar in markabka MV.
Maxaad Naceen: Labada Taageerayaasha iyo dhaleecayn nacay qaawan Cyrus in muujinaya dherersan kubada wrecking Escuardo ah taas oo ahayd mid aad u daandaansi ah.
4. Miley Cyrus - Ma Joojin Karin
"Ma Joojin Karin" waa hees by Miley Cyrus ka iyada album studio afaraad Bangerz. Waxaa la sii daayay June 3, 2013 sida hal hogaanka ka album ah. Waxay leedahay in ka badan 411 milyan oo views on Youtube sida ee 10 June 2014. Waa pop ah, R & B oo song qoob in wadahadalo xisbiga guri iyo isticmaalka daroogada madadaalada muuqan iyada.
Maxaad Naceen: Wixii Cyres ee daandaansi image iyo content ee lyrics ah.
5. cilmi - Gangnam Style (Gangnam Style) M / V
"Gangnam Style" ayaa helay caan weyn, laakiin waxaa jira dad aan jeclaan.
Maxaad Disiked: badantahay inay ugu wacantahay midab nooga waran iyo dadka helidda comedy ma qoslo.
"Strong" waa xayaysiinta siyaasadeed oo uu soo saaray xilli Rick Perry Madaxweynaha December 2011 2012 horu madaxweynaha xisbiga Jamhuuriga. Ad waxaa looga soo horjeeday in diinta, codbixiyayaasha bulsho muxaafidka ah. Waxaa la kiciyey muran ah ee ka qabashada naageysta ee ciidamada iyo diinta ee dugsiyada dadweynaha. Sida of June 10, 2014 waxa uu leeyahay in ka badan 8.8 million views.
7. Nicki Minaj - hoe Nacaska jidkiisu (cad)
"Hoe Nacaska jidkiisu" (in music video nadiif ah oo loo yaqaan "Nacaska jidkiisu Nacaska jidkiisu") waa hees ay Trinidad-American heesaa Nicki Minaj sii daayay December 20, 2011. Waxaa ay leedahay in ka badan 83 milyan oo views on Youtube sida June 10, 2014 song qoreysa hanqadhka durbaan double-degdeg ah iyo saamaynta xooga dhawaaq la yaab leh oo ay la socdaan Minaj oo bandhig style ah heesaha rap-deg deg ah. Video waxay muujinaysaa in iyada qurxiyo duurjoogta iyo seenyada kala duwan laga bilaabo meel duurjoogta yoga in gurxamayo cadhooday dharka childlike halka taagan ah kursiga buux dhaafay ee casaan.
Maxaad Naceen: Wixii ay wildness xad-dhaaf ah ama eccentricity iyo Nicki la colorfully dhaceen.
8. Rebecca Black - My Moment - rasmiga Music Video
"My Moment" waa hees sung by artist lagu qoro American Rebecca Black Waxaa la sii daayay oo ku saabsan July 19, 2011. Waxaa ay leedahay in ka badan 39 milyan oo views on Youtube sida June 10, 2014 Waxa is-siinta-dabagal song in ay iyada ugu horeysay hal "Friday", ka hadlaysaa "neceb" oo dhaleeceeyay iyada sii daayo hore. Video ayaa u muujinaya "kaca lama filaan ah ay u warkiisiina" Black iyo iyada "daqiiqado".
Maxaad Naceen: Wixii codka lagu kacsan baaraandegi iyo codkeeda sanka taas oo sanqadha cajiib ah.
9. Justin Bieber - saaxiibkeed
"Saaxiib" waa hees by artist lagu qoro Canada Justin Bieber ka album studio saddexaad Deris la sii daayay on March 23, 2012. Waxay leedahay in ka badan 332 milyan oo views on Youtube sida June 10, 2014. The garaaca style Sacabbo Tumid ​​gacanta ayaa lagu hayaa ugu yaraan in ay oggolaadaan in Bieber ee raabka cod yar yahay. Video ayaa qoreysa Bieber Codka hoos galeen dhegihiinna gabdhaha iyo ku cayaartay leh. Waa isku day ah in ay soo bandhigaan Bieber in eegno qaan badan hore videos.
Maxaad Naceen: Sida ay dhaleecayn lyrics waa doqon ah oo aan qaan gaarin
10. cilmi - mudane M / V
"Gentleman" oo sidoo kale ay PSY. Waa u badan tahay in ay hesho waxa warkiisiina wuxuu sidoo kale helo necebyahay, sidoo kale.
Maxaad Naceen: badantahay inay ugu wacantahay midab nooga waran iyo dadka helidda comedy ma qoslo.
> Resource > YouTube > Top 10 Most jeclaysteen iyo waxaanay jeclaysan Videos on YouTube